Vokatry ny diso diso an'arivony maro any Wales | Vaovao momba ny gadget
Eder Esteban | | About us, teknolojia
Efa ela isika no nahita ny fomba mahazo vahana ny teknolojia famantaran-tarehy. Tsy amin'ny telefaona finday ihany fa amin'ny fampiasana hafa toy ny fiarovana. Ohatra, ny Polisy Welsh dia nampiasa azy io tamin'ny Champions League Final tamin'ny taon-dasa. Noho io haitao io dia afaka mamantatra olona mampidi-doza na mitady izy ireo.
Na dia maro aza ny mitsikera ny fiasan'ny tarehy. Zavatra iray izay hanontaniana indray momba ny tarehimarika mahomby amin'ity lalao Champions League farany ity. Satria zara raha 7% ny taham-pahavoazana, miaraka amin'ny 2.000 ny lafy ratsy diso. Data vitsivitsy izay tsy manome aingam-po fahatokisana firy.
Nampiasa an'ity rafitra ity ny polisy nandritra ny famaranana tamin'ny fifaninanana. Totalin'ny Fanairana miabo 173. Na dia ny misongadina aza dia nisy 2.297 XNUMX ny lafy ratsy. Izay mitondra antsika amin'ity tahan'ny laharana 7% noresahintsika ity. Saingy nilaza ny polisy Wales fa afa-po amin'ny hetsika izy ireo. Hatramin'ity teknolojia ity dia nahatratra fisamborana 450 tamin'ny tranga maro samihafa izy ireo.
Ny tanjon'ny fanekena ny tarehy dia mamorona algorithm izay ampidirina ny sarin'olona mampidi-doza na olona hijerena. Amin'izany fomba izany, ny algorithm dia afaka mahita ireto olona ireto. Ankoatry ny fahafantarana azy ireo amin'ny vahoaka amin'ny hetsika toa ny Champions League. Ka manafaingana ny fizotran'ny toerana misy azy io matetika.
Na eo aza ny isan'ny positives diso an'ity tarehy ity, nilaza ny polisy fa fahita amin'ireo karazana rafitra ireo. Fa miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana dia mihatsara izy ireo. Ka hihena tsikelikely io tarehimarika io. Ho fanampin'izay, nilaza ihany koa izy ireo fa ambany ny kalitaon'ny sary nomen'ny UEFA sy ny Interpol.
Fantatr'izy ireo ihany koa ireo olana sy ahiahy ateraky ny fanekena ny tarehy amin'ny tsiambaratelo. Ka manantena izy ireo fa hampidirina ny mekanika handaminana izany sy hahazoana fifandanjana. Ny mazava dia izao fa tsy ny fotoana farany handrenesantsika ireo olana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » 2.000 ny fiheverana diso amin'ny fanekena ny tarehy tamin'ny lalao famaranana farany tamin'ny Champions League
HTC dia nanambara ny fandefasana ny HTC U12 miaraka amin'ny iPhone 6 Components